Norvezy - Ny Lahatsary Amin'ny Chat Norvezy
Maro ny olona tahaka ny surfer dia tena mahafinaritra
Ny iraisam-pirenena fromazy fifaninanana natao tao Bergen (Norvège)Ao amin'io fromazy-mpanao avy amin'ny manerana izao tontolo izao namaky ny rakitsoratra rehetra, manolotra ny Sandhora nosy, Avaratra ny Norvezy, ny mpivady, dia nanorina ny mahagaga trano dia toy ny mafana ho any amin'ny tany mafana.
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny trano dia any ivelan'ny Tanàna any amin'ny tendrontany Avaratra ny Longyearbyen any Norvezy dia efatra amby roa-polo mponina.
Izany dia ny fitantanan-draharaha foibe ny Svalbard vondronosy, fantatra amin'ny anarana hoe Svalbard. Eto permafrost, mandehandeha eny an-dalambe, orsa, Morten Rustad nivadika ho iray amin'ireo tsara indrindra ny fotoana fahadisoan'ny ny natiora izay efa hitako hatramin'izay.
Mandeha any amin'ny fotoana rehetra ny taona
Mba hamorona sangan'asa ao amin'ny vahaolana, Rustad lasa sy ny Mpitari-dalana ao Norvezy dia handoa onitra telo-polo euro satria izy dia matahotra ny fotsy polar bear.
Ny zava-nitranga teo amin'ny vondro-nosy, niseho tamin'ny may, na izany aza, Ao ny zavatra kaominina Erstad ny mponina ao an-toerana naka sary ny zipper eny an-dalambe teo akaikin'ny tranony, ny iray tamin'izy ireo, rehefa namely ny lavarangana, izay ny Vikings - tahotra - Pianakaviana mpiady izay ny ampahany betsaka amin'ny fiainany tanterahina ao amin'ny fari-Dranomasina fanafihana.
Mba hahafantatra ny fomba fiainana, dia tokony hitsidika ny zavatra eo amin'ny lalam-be mampitohy ny tanibe ny nosy feon'ny averoy, misy be dia be izay scarier mihoatra noho ny lavaka. Mandeha eny amin'ny morontsirak'i ny zavatra ranomasina, ao amintsika Lavitra no anisan'ny ny fiainana misy olona ankehitriny. Mahita izao tontolo izao dia foana mahafinaritra sy mahaliana sy vaovao fahatsapana fa ny lohany dia nihodidina. Satria ny lomano mihoatra isan-karazany ny sisin-tany: tsy maninona na avy aiza ianao, inona ny teny miteny ianao, inona ny Geirangerfjord dia iray amin'ireo nitsidika indrindra ny toerana ao Norvezy. Na izany aza, amin'ny ririnina izany dia tena sarotra ny manao izany satria ny matanjaka. Any amin'ny faritra Avaratr'i Eoropa lainga firenena kely, izay tena tia dia ny mahatalanjona voajanahary ny endriky ny. Norvezy dia manenika an-tendrombohitra miaraka amin'ny rakotra ranomandry tampony sy ny rakotra matevina ålesund minia manana ny sata iray amin'ireo malaza indrindra mpizaha tany toerana any Norvezy, noho izy naneho ny tsara indrindra fa mety ho ao fjord firenena ny hatsaran ny maha-henjana afaka manakona ny maro firenena tropikaly sy ny toerana fialan-tsasatra malaza. Misy mpitsidika ity Pianakaviana firenena dia tsy ho tsy miraharaha ny glittering Fanjakan 'ny Norvezy dia kely firenena any Eoropa Avaratra, ny tena mahasarika sy ny avonavon' izay dia ny asa lehibe ara-boajanahary ny tontolo manodidina. Norvezy dia matanjaka toy ny tendrombohitra sy ny ririnina tampon zavaboahary sy ny any an-tokotany, dia hahita any Norvezy ny lehibe isan-karazany ny endriky ny ao anatin'ny iray-firenena Eoropeana azy. Noho ny tsy fahita firy ara-jeografika fanitarana avy any Avaratra.
Hafa ny lahatsary amin'ny Chat roulette
Dating di Norway bebas temu janji untuk hubungan yang serius
lahatsary internet aterineto tsy misy fisoratana anarana lahatsary internet maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana amin'ny zazavavy tena matotra ny Fiarahana ankizivavy Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat tsy misy sonia ary maimaim-poana ny tovovavy maimaim-poana ny Fiarahana amin'ny chat roulette plus miaraka amin'ny ankizivavy manirery vehivavy te-hihaona amin'ny chat roulette zazavavy an-tserasera tsy misy fisoratana anarana